Big Programming Mashoko kana Mitsara Martech Zone
Chishanu, January 26, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndichishanda nevamwe vakasarudzika programmers, ini ndinowanzozviwana ndiri mumisangano nevakagadziri, vatungamiriri uye vanogadzira avo (ndinofunga) vanofarira kukanda mamwe mazwi makuru kana zvirevo kunze uko kuyedza nekutyisidzira kuburitsa kweVanezvigadzirwa mamaneja kana vatengi vavo.
Ndicho chimwe chezvinhu izvo programmers vanofarira kuita. Heano gumi avo ane rondedzero yakapusa (izvo pasina mubvunzo zvinokwevera kutsamwa kwevagadziri kwese kwese pandinobira mazwi avo kurufu zvidhoma zvangu zvemota zvakapusa):
Abstraction - uku kutora kutora kwakaoma kuita kana basa uye kuchinyatso kupaza zvine musoro… kungave nehukuru (A ndeya B, B ndeya C, nezvimwewo) kana nehunhu kana basa (ruvara, saizi, huremu, nezvimwewo). Abstraction inoita kuti chinhu chakanangana nechinhu chive nyore nekuronga mashandiro zvine musoro. Kuvaka mota yangu, ini ndinogadzira furemu, injini, uye muviri zvakasiyana.
Kuderedzwa - izvi zvinoreva kuti kune imwe yekare kodhi mune ino system inogona kusara asi inoda kubviswa. Kana kodhi yadzikiswa, programmers havataure kodhi kana kushandisa kodhi nyowani kudzamara mareferenzi ese aenda kune yekare, panguva iyoyo inofanira kubviswa. Dzimwe nguva, kana chiri chinhu chiri kuenda, unogona kuchichengeta kwechinguvana nenyevero kuvashandisi vako kuti iri kuenda. Ini ndinowana itsva stereo system ine new wiring asi ini ndinosiya iyo yekare wiring uye handishandise iyo.
Encapsulation - iyi ndiyo nzira yekuronga ako ekuronga mabasa mukati memubereki kana iro basa risingasvike kune chero zvimwe zvikamu zveiyo system. Kana iwe uine mamirioni emabasa, iwe unoda kuti ave nawo zvakarongeka uye zvinoshanda mukati medzimbo dzavanoshanda pane kuti zviwanikwe pasi rose. Ndinoisa michina yekutsigira injini muchikamu cheinjini… ini handiise firita yemafuta pachigaro chekumashure.
nhaka - uku kugona kutora zvivakwa zveimwe chidimbu cheyakajairika kodhi (kirasi) kuti uishandisezve kuita nyowani kushanda pasina kuinyorazve. Nhaka ndechimwe chinhu chakanaka chakanangana nekusimudzira maitiro. Chigaro changu chemotokari chinogona kushandiswa kutakura mwana kana munhu mukuru - chero anogara machiri.
Kujairika - iyi ndiyo nzira yekuronga dhata zvakanyanya kuita mushe mushe nekuvaka mareferenzi. Muenzaniso ungave kana ndaifanira kurekodha marobhoti zuva rese… tsvuku, yero uye girini. Panzvimbo pekunyora rekodhi yega yega nered, yero, uye green - ini ndinonyora 1, 2, uye 3 ndobva ndagadzira imwe tafura apo 1 = tsvuku, 2 = yero uye 3 = girini. Nenzira iyi ini ndinongo rekodha tsvuku, yero uye girini kamwe. Imwe neimwe yemasuo angu emota ine mubato mumwechete wemusuwo. Mubato mumwe, unoshandiswa munzvimbo ina dzakasiyana pane mana akabata akasiyana.
Chinhu Chakatemerwa - mumitauro yemazuva ano ekuronga, iyi inzira yekugadzira iyo inobvumidza iwe kunyora yakatarwa kodhi muzvidimbu, nekushanda, wozoishandisa zvakare. Muenzaniso ungave kana ini ndaida kutarisa kune yakavakirwa email kero. Ini ndaigona kuvaka basa kamwe chete, ndobva ndarishandisa pese pandinenge ndichida muchirongwa changu. Mota yangu ine 18 - marimu ayo anogona kushandiswa pane dzimwe mota neyakafanana kana vamwe vagadziri.
Polymorphism - Iyi yakaoma kutsanangura, asi zvirinani kugona kugadzira kodhi inogona kushandiswa zvine simba kune mamwe mamiriro. Mune mamwe mazwi, inogona kugara yakasarudzika uye ine simba mashandiro nenzira iyo yainongedzwa. Iyi inzira inoshanda kwazvo yekusimudzira. Ini ndinogona kushandisa yangu mota yemagetsi kuburitsa foni yangu kana kuendesa muto kupombi yangu yeturu.
Recursion - iyi nzira iyo kodhi inongedzera pachayo. Dzimwe nguva, zvinoshanda uye zvine chinangwa, asi dzimwe nguva zvinogona kusimudzira kuwedzera kwako kunyorera kubva mukutonga. Ini ndinodzvanya tsvaga pane yangu stereo yemota uye inosota kuburikidza newairesi. Izvo hazvipedze, zvinongoramba zvichienda.
Kugadzirisa - iyi ndiyo nzira yekunyora zvakare kodhi kuti zvive nyore kuitevera kana kuironga zvirinani asi kwete hazvo kuwedzera chero kumwe kushanda. Ini ndinovakazve injini yangu.
Server Yakavakirwa Architecture (SOA) - tora chinhu chakatarisana nechirongwa uye chishandise kune akakura masisitimu kwaunogona kuve neese masystem anoita mamwe mabasa. Iwe unogona kuve nehukama hwehukama manejimendi manejimendi iyo inotaura kune ecommerce system iyo inotaura kune yekutumira system, nezvimwe. Ini ndinodhonza tirera nemota yangu kutumira zvinhu kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Ini ndinoshandisa trailor hitch (XML) kuvabatanidza.
Ndinoona kuti madimikira angu aisawanzo kuve akakwana pachinangwa Ndinovimba vakabatsira zvishoma, hazvo!
Mamwe mazano kana iwe uchinzwa aya mazwi mumusangano wako unotevera nemugadziri ... usamhanye kudzokera kuchigaro chako wochitarisa kumusoro Wikipedia, ivo vachatarisa. Usatambe, ivo vacharwisa. Hezvino zvekuita… fungisisa nepahwindo sekunge iwe uri mukufunga kwakadzama wobva watarisa kumashure neziso rekuda kuziva kana kukwenya chirebvu chako. Mirira ivo vatevere kuzivisa kwavo nerumwe ruzivo.
… Vari kutarisa.
LOL iwe wakarovera chaizvo Doug 🙂 Uri kuedza kutiburitsa kunze kwebhizinesi? Iwe unoziva zvakanyanya isu isu bhangi pane izvo zvirevo zvisiri kunzwisiswa uye nekudaro kuve neyedu nzira nevatengi. Zvino isu tawana nzira yekuvarova nenzira kubatanidza iwo mabuzzwords ekugadzira imwechete hofori mutsara inogona kuenda seiyi:
Zvakanaka iwe unoziva chimiro chauri kuyedza kuisa mukati chinogona kubviswa kune akawanda zvinhu ayo anokomberedza mashandiro uye kutaurirana kuburikidza neyakaitirwa sevhisi architecutre.
Kutenda, AL! Chirevo chako chakajeka.
Ndatenda. Ndinovimba iwe watenga iyo!
Ndiri kutarisa nepahwindo ndichifungisisa nezvazvo. 🙂
Ndira 27, 2007 na2: 58 PM
Kuve software yekugadzira ini ndinogona kukoshesa iyi posvo. Hatisi isu tese takashata hazvo 😉 Ini handimbofa ndakasimbisa vanhu vane techno babble yakadaro
Rega ndiedze ndimbofunga mamwe mazwi kwauri….
Ndira 27, 2007 na3: 24 PM
Zvese mukunakidzwa kwakanaka, Dean! Kutenda nekumira! 🙂